EA015 - OMG Wireless Chair Pad Exit Alarm ho an'ny trano (fisorohana ny fahalavoan'ny be antitra) - $ 380 | Vahaolana OMG
EA015 - OMG Wireless Chair Pad Exit Alarm ho an'ny trano (fisorohana ny fahalavoan'ny be antitra) - $ 380
Quiet CordLess® fakantsary tsy misy rindrina
Tsy misy tabataba ao anaty efitrano! Apetraho ny Quiet Fall Monitor raha mila izany ianao
Atsaharo ny tabataba any anaty efitrano - Fanafody mampidi-doza.
Ny "Emergency Fall Monitor Monitor" (New Patent Patented Technology Monitor) dia azo alaina eny ivelan'ny sehatry ny mponina (fanairana tsy misy kabary). Ny Monitor ihany koa dia azo apetraka eo ambonin'ny seza izay mampihena ny tabataba alarobia eo akaikin'ny lohan'ny mponina ary ny TamperProofs ny monitor ka tsy afaka mamerina izany amin'ny tenany ny mponina. Ny monitor ihany koa dia azo apetraka ao amin'ny lalantsara izay mampihena ny tabataba fandrehetana efitrano. Azo antoka kokoa satria voamariky ny fahazavana mamirapiratra sy ny fanairana mangina ao an-dalantsara izay mampahafantatra azy ireo rehefa mipetraka ny mponina.
Ireo fepetra fiarovana azo antoka
Ity no teknolojia fanodinan-doha amin'ny alàlan'ny famantaranandro miady amin'ny fisorohana ny fisorohana amin'ny fisorohana ny fiarovana ny pataloha izay ahafahan'ny mpanolotsaina iray mahafantatra raha very ny fanilikilihana na tsy mandeha lavitra ny drafitra Wireless fakantsary. Azonao atao koa ny mipetraka ivelan'ny efitrano fitsaboana mba hamahana vahaolana!
Tsy misy tadidy eo anelanelan'ny pads sy Wireless mijery monitor
Ny tadim-piaramanidina maimaimpoana maimaim-poana dia mampitombo ny fisorohana ny fisorohana sy ny fantsom-pahitalavitra manampy amin'ny fampihenana ny fakana amam-pihetsiketsehana. Ny foibem-pifandraisana maimaim-poana dia napetraka eo ambanin'ny mponina. Rehefa mitsangana ny mponina ary manala ny tsindry avy amin'ny takelaka, dia alefa any amin'ny fantsona fahita any an-dalantsara ny mari-pandrefesana, hampitandrina ny mpikarakara.
Ny TL-2100G Wireless Fall Monitor dia manondro hatrany fa misy mari-pamantarana azo raisina avy amin'ny famolavolan'ny sensor ary ny rafitra dia amin'ny lamina tsara miasa. Raha toa ka tapaka na tsia ny mari-pandrefesana fanesorana dia alao ny fanamafisam-peo sy manondro ny mari-pamantarana.
Miasa amin'ny singa roa amin'ny fotoana iray
Ampiasao ny fahitalavitra mahaleotena Quiet Wireless amin'ny alàlan'ny fandrefesana fandriana; kodiarana; dratsiny; kisendrasendra.
Ny Monitor dia afaka miasa amin'ny singa roa amin'ny fotoana iray raha ilaina.
QUIETER - Volavolana tanteraka.
Tsy misy tadidy eo amin'ny pads sy ny monitors - mampihena ny loza mitranga ary manala ny tady fanakanana na simba.
Fandefasana fanamafisam-peo Feno fanamarinana - fampandrenesana ny mpitaiza raha toa ny fifandraisana eo amin'ny sensor pad sy ny monitor dia misaraka.
Fomba fanamafisana: Ny mpikarakara miaraka amin'ny fanalahidy dia afaka mamerina indray ny monitor miaraka amin'ny Patented, Caregiver Key ™ izay manara-maso ny Tamperproofs.
Tsy misy ny fiarovana tsy voaaro: Tsy afaka manadino ny manara-maso ny mpanara-maso ny mpikarakara
Auto-Reset rehefa ampidirina amin'ny pad ianao.
Nanaitra ny jiro Status Visual ka nahafahan'ny mpikarakara hahita alarobia lavitra.
Battery mandeha (3-AA tsy tafiditra) na AC adapter (AC-05).
Fampahafantarana momba ny Batemy ambany.
Tandremo tsy fampandrenesana.
Ny mpampiasa mpitsabo mpanampy - Fidirana amin'ny rafitra antsoina hoe rafitra mpanampy.
Feo fanairana marobe.
Miasa amin'ny fandriam-pahalemana na fakan-drivotra fandefasana kofehy, drafitry drafitry drafitry drafitry drafitry drafitry drafitry ny Wireless ary PIR-01 ao amin'ny Infrared Motion.
Miaraha miasa amin'ny:
15055 Total Views 9 Views Today
GPS034W - OMG fanaraha-maso momba ny fahasalamana GPS Watchly